Dowladda Soomaaliya oo diyaarineysa Hanaanka dib u Heshiisiinta Qaranka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Soomaaliya oo diyaarineysa Hanaanka dib u Heshiisiinta Qaranka
Dowladda Soomaaliya oo diyaarineysa Hanaanka dib u Heshiisiinta Qaranka
Muqdisho (SNTV)- Shirka wadatashiga Diyaarinta Hanaanka Qaran ee dib u Heshiisiinta ayaa diirada lagu saaraya sidii loo heli lahaa qabya qoraalka siyaasadda qaran ee dib u heshiisiinta dalka.
Waxaa ka qeyb galaya qeybtiisa maanta oo uu furay ku simaha wasiirka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda Soomaaliya Mudane Cabdulaahi Faarax Wehliye, waxaa ka qeyb galaya madax ka socota hey’adaha dowladda Federaalka.
Xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisinta Soomaaliya Cabdulaahi Maxamuud Xasan ( Azhari) waxa uu sheegay in wadatashiyada Hanaanka qaran ee dib u heshiisiinta inuu soo maray marxalada kala duwan wasaaraduna uu ku han weyntahay inuu noqdo mid mira dhala, lana gaaro dib u heshiisiinta iyo iscafin waarta .
ku simaha wasiirka ahna wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalka Mudane Cabdulaahi Faarax Wehliye oo furay kulanka waxaa uu tilmaamay muhiimada shirkani furmay uu yahay in la helo hanaan sal adag leh oo lagu wajaho dib u heshiisiinta dalka.
Madaxda hey’adaha dowladda ka socda oo ka hadlay madasha shirka ayaa bogaadiyay wadatashiga wasaaaradda Arimaha Gudaha ee la sameynaysa dhammaan dhinacyada muhiimka u ah diyaarinta hannaanka qaran ee dib u heshiisnta, Shirkan ayaa soconaya laba maalmood iyada oo maalinka berrita ah qeybtiisa labaad latashi lala sameyn doono ururada bulshada rayidka oo laf dhabar u ah geed u socodka hannaanka dib u heshiisiinta qaranka.
Previous articlePutin iyo Angela Merkel oo Wadahadal ku leh Germany
Next articleDuqa Muqdisho iyo Ilwad Elman oo isla gartay awood siinta Dhallinyarada